ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: Attack on Nurula police post in Maungtaw leaves one police officer dead
Violent attackers who arrived on three motorcycles assaulted the two guards of the post with small weapons fire, but members of the post were able to repel the attackers, forcing them to withdraw with injuries and abandon their motorbikes. One police officer died of his wounds and the other one was slightly injured.
Police seized one home-made bomb and four pistols together with the motorbikes.—Myanmar News Agency
မောင်​​တောမြို့နယ်နူရုလ္လာ ရဲကင်းစခန်း၌ ယနေ့ည​နေ ၅း၄၅ မိနစ်​တွင်​ အမည်​မသိ ဘင်္ဂါလီငါးဦးမှ ဆိုင်​ကယ်​နှစ်​စီးဖြင့်​ စခန်း​ရှေ့တွင်​ ရပ်​ကာ ​သေနတ်​တိုဖြင့်​ ၁၀ချက်​၁၅ ချက်​နီးပါးပစ်​​ခေတ်​၍ ရဲဒုတပ်ကြပ် မင်းမင်းစိုး မှာ ယာဘက် နံ​ဘေးတွင်​​ သေနတ် ​ဒဏ်​ရာ ၂ ချက်​ ယာဘက်​လက်​တွင်​၁ချက်​ယာဘက်​လက်​ဖျန်​ရိုး ၂ ချက်​ ဝဲနံ​ဘေးတွင်​ ၁ ချက်​ ​သေနတ်​ဒဏ်​ရာရရှိ ကျဆုံးခဲ့သည်။
ရဲတပ်ကြပ် မျိုးဇော်ကို မှာ ဝဲဘက်​နံ​ဘေး​ပေါက်​ထွက်​ဝမ်းဗိုက်​ထိမှန်​ပြီး ညာဘက်​​ပေါက်​ထွက်​ဒဏ်​ရာရရှိပြီး ​မောင်​​တောမြို့ပြည်​သူ့​ဆေးရုံးကြီးသို့ ည​ ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ်​တွင်​ အ​ရေး​ပေါ်ခွဲစိတ်​ ကုသမူ ခံယူ​နေ​ကြောင်း သိရှိရသည်။
#MOI Webportal Myanmar